Na teo aza ny krizy ara-pahasalamana, noho ny Covid-19, nahavita nanondrana entana betsaka indrindra i Chine. Araka ny tatitra nataon’ny fadintseranana sinoa, nitombo 60 % be izao tao anatin’ny herintaona ny entana naondrana tany ivelany, voakajy tamin’ny volana febroary lasa teo. Fanondranana entana nameno ny banga tamin’ny febroary 2020, fotoana niatombohan’ny valanaretina. Mitombo ihany hatramin’izao ny tinady amin’ireo entana vita sinoa, anisan’izany ny fanafody ny fitaovana informatika ho an’ny “télétravail”.
Ny faran’ny volana febroary teo, niantso hanatsara sy hampitombo ny vokatra hasy ny fanjakana any Egypta. Tanjona ny hamerina ny lazan’i Egypta amin’ny fambolena hasy, izay nihena 50 % tato anatin’ny 10 taona farany, nihena toy izany koa ny velaran-tany fambolena azy. Nampalaza an’i Egypta maneran-tany ny voly hasy hatramin’izay, saingy mitontongana izany ankehitriny. Na izany aza, mbola manondrana kalitao tsara misy ao aminy ity firenena ity. Ho an’ny orinasa mpanao lamba ao aminy kosa , manafatra karazany hafa (Upland) avy any amin’ny firenena maro.
Mahatsiaro matiantoka ireo mpiompy noho ny fiakaram-bidin’ireo akora fototra hamahanana ny akoho amam-borona any Frantsa. Mifanaraka amin’ireo mpivarotra vaventy ireo mpiompy akoho manotody lava any Frantsa. Tsy mihetsika eo amin’ny 1 % na 2 % ny tombom-barotra azon’izy ireo, raha tokony ho 7 na 8 %. Mitombo ihany koa anefa ny hetra takin’ny fanjakana amin’ireo mpiompy ireo, arakaraka ny fiompiana ataony. Noho ny fahitana izany, vitsy ny tanora sahy mitrandraka ity fihariana ity, vitsy hatrany am-boalohany eo amin’ny fidirana sekoly mpamboly sy mpiompy.
Mifanaraka ny Vondrona eoropeanina sy Etazonia hampitsahatra ny haban-tseranana any aminy avy mandritra ny efa-bolana. Haban-tseranana nifaninan’ny roa tonta amin’ny Boeing sy ny Airbus amin’ny lafiny varotra. Vaovao tsara noraisin’ny indostria roa tonta, ary dingana lehibe eo amin’ny fiaraha-miasa ara-toekarena ho an’ny taona ho avy manaraka. Araraotin’ny roa tonta ny efa-bolana hamahana ny olana amin’ny tsy fitovian-kevitra amin’ny zotra an’habakabaka.